Mareykanka oo duqeyn la eegtay Al Shabaab – Radio Baidoa
Mareykanka oo duqeyn la eegtay Al Shabaab
Taliska Ciidanka Mareykanka Africa ee AFRICOM ayaa wuxuu sheegay Duqeyn dhacday gelinkii dambe ee shalay inuu ku beegsaday xubno ka tirsanaa Al Shabaab, kuwaasi oo ku sugnaa meel 74-KM Waqooyi Galbeed ka xigta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Mareykanka ayaa waxa uu sheegay weerarkan dhacay 2-tii bishan in uu ku dilay Afar nin oo ka tirsanaa Al Shabaab, islamarkaana aanay jirin khasaare dadka rayidka ah ka soo gaaray duqeyntan.
“Ciidamada Mareykanka oo kaashanaya kuwa Dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ay weerar ku qaadeen Xagjirinta Al-Shabaab meel 74-KM Waqooyi Galbeed ka xigta magaalada Muqdisho galabnimadii Khamiistii, waxaan ku dilnay Afar Argagixiso.” Ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Taliska (AFRICOM).
Ururka Al Shabaab oo duqeyntan uga hadlay baraha ay wararkooda ku faafiyaan ayaa waxa ay ku sheegeen duqeyntan Afarta qof ee lagu dilay inay ahaayeen dad shacab ah.
Waa duqyantii 15-aad ee Maraykanku sannadkan ka gaystaan gudaha Soomaaliya taasi oo bartilmaameeedsatay xoogag ka tirsan Ururka Al Shabaab.
RW:Khayre oo caawa ka qeyb galaya Munaasabadda Puntland